समाचार - ग्लोबल 5G स्पेक्ट्रम को एक द्रुत सिंहावलोकन
अहिलेको लागि, विश्वको 5G स्पेक्ट्रमको पछिल्लो प्रगति, मूल्य र वितरण निम्नानुसार छ: (कुनै पनि गलत ठाउँ, कृपया मलाई सच्याउनुहोस्)
पहिले, चार प्रमुख घरेलु अपरेटरहरूको 5G स्पेक्ट्रम आवंटनलाई हेरौं!
चीन मोबाइल 5G फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड:
2.6GHz फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड (2515MHz-2675MHz)
4.9GHz फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड (4800MHz-4900MHz)
अपरेटर आवृत्ति ब्यान्डविथ कुल ब्यान्डविथ नेटवर्क
फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड दायरा
चाइना मोबाइल 900MHz(ब्यान्ड8) अपलिंक:889-904MHz डाउनलिंक:934-949MHz 15MHz TDD: 355MHzFDD: 40MHz 2G/NB-IOT/4G
1800MHz(ब्यान्ड३) अपलिंक:1710-1735MHz डाउनलिङ्क1805-1830MHz 25MHz 2G/4G
2GHz(ब्यान्ड३४) 2010-2025MHz 15MHz 3G/4G
1.9GHz(ब्यान्ड३९) 1880-1920MHz ३० मेगाहर्ट्ज 4G
2.3GHz(ब्यान्ड ४०) 2320-2370MHz ५० मेगाहर्ट्ज 4G
2.6GHz(ब्यान्ड41, n41) 2515-2675MHz 160MHz 4G/5G
चीन Unicom 5G फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड:
3.5GHz फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड (3500MHz-3600MHz)
अपरेटर आवृत्ति ब्यान्डविथ टोडल ब्यान्डविथ नेटवर्क
चीन Unicom 900MHz(ब्यान्ड8) अपलिंक:904-915MHz डाउनलिंक:949-960MHz 11MHz TDD: 120MHzFDD: 56MHz 2G/NB-IOT/3G/4G
1800MHz(ब्यान्ड३) अपलिंक:१७३५-१७६५ मेगाहर्ट्ज डाउनलिंक:1830-1860MHz 20MHz 2G/4G
2.1GHz(ब्यान्ड1,n1) अपलिंक:1940-1965MHz डाउनलिंक:2130-2155MHz 25MHz 3G/4G/5G
2.3GHz(ब्यान्ड ४०) 2300-2320MHz 20MHz 4G
2.6GHz(ब्यान्ड41) 2555-2575MHz 20MHz 4G
चाइना टेलिकम 5G फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड:
3.5GHz फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड (3400MHz-3500MHz)
चाइना टेलिकम 850MHz(ब्यान्ड ५) अपलिंक:824-835MHz
डाउनलिंक:869-880MHz 11MHz TDD: 100MHzFDD: 51MHz 3G/4G
1800MHz(ब्यान्ड३) अपलिंक:१७६५-१७८५ मेगाहर्ट्ज डाउनलिंक:1860-1880MHz 20MHz 4G
2.1GHz(ब्यान्ड1,n1) अपलिंक:1920-1940MHz डाउनलिंक:2110-2130MHz 20MHz 4G
2.6GHz(ब्यान्ड41) 2635-2655MHz 20MHz 4G
चाइना रेडियो अन्तर्राष्ट्रिय 5G फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड:
4.9GHz(4900MHz-5000MHz), 700MHz फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम अझै निर्धारण गरिएको छैन र अझै स्पष्ट फ्रिक्वेन्सी छैन।
२. ताइवान, चीन
हाल, ताइवानमा 5G स्पेक्ट्रमको बिडिङ मूल्य 100.5 बिलियन ताइवान डलर पुगेको छ, र 3.5GHz 300M (गोल्डेन फ्रिक्वेन्सी) को बिडिङ रकम 98.8 बिलियन ताइवान डलर पुगेको छ। यदि हालैका दिनहरूमा स्पेक्ट्रमको मागको अंशमा सम्झौता गर्न र छोड्ने कुनै अपरेटरहरू छैनन् भने, बोलीको रकम बढ्दै जानेछ।
ताइवानको 5G बिडिङमा तीन फ्रिक्वेन्सी ब्याङ्गहरू समावेश छन्, जसमध्ये 3.5GHz ब्यान्डमा 270MHz 24.3 बिलियन ताइवान डलरबाट सुरु हुनेछ; 28GHz प्रतिबन्ध 3.2 बिलियन मा सुरु हुनेछ, र 1.8GHz मा 20MHz 3.2 बिलियन ताइवान डलर मा सुरु हुनेछ।
तथ्याङ्कका अनुसार ताइवानको फाइभजी स्पेक्ट्रम (१०० अर्ब ताइवान डलर) को बिडिङ लागत जर्मनी र इटालीमा रहेको फाइभजी स्पेक्ट्रमको रकमभन्दा मात्र कम छ। यद्यपि, जनसंख्या र इजाजतपत्र जीवनको हिसाबले, ताइवान पहिले नै विश्वको नम्बर एक बनिसकेको छ।
विशेषज्ञहरूले भविष्यवाणी गर्छन् कि ताइवानको 5G स्पेक्ट्रम बिडिङ संयन्त्रले अपरेटरहरूलाई 5G लागत बढाउन अनुमति दिनेछ। यो किनभने 5G को मासिक शुल्क शायद 2000 ताइवान डलर भन्दा बढी छ, र यो जनताले स्वीकार गर्न सक्ने 1000 ताइवान डलर भन्दा कम शुल्क भन्दा धेरै छ।
भारतमा स्पेक्ट्रम लिलामीमा 3.3-3.6GHz ब्यान्डमा 5G र 700MHz, 800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 2300MHz, र 2100MHz, 4G सहित लगभग 8,300 MHz स्पेक्ट्रम समावेश हुनेछ।
700MHz स्पेक्ट्रमको प्रति इकाई बिडिङ मूल्य 65.58 बिलियन भारतीय रुपैयाँ (US $923 मिलियन) हो। भारतमा ५जी स्पेक्ट्रमको मूल्य निकै विवादास्पद रहेको छ । 2016 मा स्पेक्ट्रम लिलामीमा बेचिएको थिएन। भारत सरकारले प्रति इकाई 114.85 बिलियन भारतीय रुपैयाँ (1.61 बिलियन अमेरिकी डलर) को रिजर्भ मूल्य निर्धारण गर्यो। 5G स्पेक्ट्रमको लागि लिलामी रिजर्व मूल्य 4.92 बिलियन भारतीय रुपैयाँ (69.2 अमेरिकी मिलियन) थियो।
फ्रान्सले फाइभजी स्पेक्ट्रम बिडिङ प्रक्रियाको पहिलो चरण सुरु गरिसकेको छ। फ्रान्सेली दूरसञ्चार प्राधिकरण (ARCEP) ले 3.5GHz 5G स्पेक्ट्रम अनुदान प्रक्रियाको पहिलो चरण जारी गरेको छ, जसले प्रत्येक मोबाइल नेटवर्क अपरेटरलाई 50MHz स्पेक्ट्रमको लागि आवेदन दिन अनुमति दिन्छ।
आवेदन दिने अपरेटरले कभरेज प्रतिबद्धताहरूको श्रृंखला बनाउन आवश्यक छ: अपरेटरले 2022 सम्म 5G को 3000 आधारित स्टेशनहरू पूरा गर्नुपर्छ, 2024 सम्म 8000, 2025 सम्म 10500 लाई बढाएर।
ARCEP लाई ठूला शहरहरू बाहिर पर्याप्त कभरेज सुनिश्चित गर्न इजाजतपत्र प्राप्त गर्न आवश्यक छ। 2024-2025 सम्म तैनाथ गरिएका 25% साइटहरूले नियामकहरूले परिभाषित गरिए अनुसार प्राथमिकताका डिप्लोइमेन्ट स्थानहरू सहित विरलै जनसंख्या भएका क्षेत्रहरूलाई फाइदा लिनुपर्दछ।
आर्किटेक्चर अनुसार, फ्रान्सका चार अवस्थित अपरेटरहरूले 3.4GHz-3.8GHz ब्यान्डमा 350M यूरोको निश्चित मूल्यमा 50MHz स्पेक्ट्रम प्राप्त गर्नेछन्। अर्को लिलामीले 70 M यूरोमा सुरु हुने थप 10MHz ब्लकहरू बेच्नेछ।
सबै बिक्रीहरू कभरेजको लागि अपरेटरको कडा प्रतिबद्धताको अधीनमा छन्, र इजाजतपत्र 15 वर्षको लागि मान्य छ।
यूएस फेडरल कम्युनिकेसन्स कमिसन (FCC) ले यसअघि मिलिमिटर वेभ (mmWave) स्पेक्ट्रम लिलामीहरू US$ 1.5 बिलियन नाघेको कुल बोलपत्रहरू सञ्चालन गरेको थियो।
स्पेक्ट्रम लिलामीको पछिल्लो चरणमा, बोलपत्रदाताहरूले पछिल्ला नौ लिलामी राउन्डहरू मध्ये प्रत्येकमा १०% देखि २०% सम्म आफ्नो बोलपत्र बढाएका छन्। फलस्वरूप, कुल बोली रकम3अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने देखिन्छ।
अमेरिकी सरकारका धेरै भागहरूमा 5G वायरलेस स्पेक्ट्रम कसरी आवंटित गर्ने भन्नेमा केही असहमति छ। FCC, जसले स्पेक्ट्रम इजाजतपत्र नीति सेट गर्दछ, र वाणिज्य विभाग, जसले मौसम उपग्रहहरूको लागि केही फ्रिक्वेन्सीहरू प्रयोग गर्दछ, खुला द्वन्द्वमा छन्, तूफान पूर्वानुमानको लागि महत्वपूर्ण। यातायात, ऊर्जा, र शिक्षा विभागहरूले पनि छिटो नेटवर्क निर्माण गर्न रेडियो तरंगहरू खोल्ने योजनाको विरोध गरे।
संयुक्त राज्यले हाल 5G को लागि प्रयोग गर्न सकिने स्पेक्ट्रमको 600MHz जारी गर्दछ।
र संयुक्त राज्यले पनि 5G सेवाहरूको लागि 28GHz (27.5-28.35GHz) र 39GHz (37-40GHz) फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर निर्धारण गरेको छ।
६। युरोपेली क्षेत्र
अधिकांश युरोपेली क्षेत्रहरूले 3.5GHz फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड, साथै 700MHz र 26GHz प्रयोग गर्छन्।
5G स्पेक्ट्रम लिलामी वा विज्ञापनहरू पूरा भइसकेका छन्: आयरल्याण्ड, लाटभिया, स्पेन (3.5GHz), र युनाइटेड किंगडम।
5G को लागी प्रयोग गर्न सकिने स्पेक्ट्रमको लिलामी पूरा भएको छ: जर्मनी (700MHz), ग्रीस र नर्वे (900MHz)
5G स्पेक्ट्रम लिलामी अस्ट्रिया, फिनल्याण्ड, जर्मनी, ग्रीस, इटाली, नेदरल्याण्ड्स, रोमानिया, स्वीडेन र स्विट्जरल्याण्डका लागि पहिचान गरिएको छ।
७। दक्षिण कोरिया
जुन 2018 मा, दक्षिण कोरियाले 3.42-3.7GHz र 26.5-28.9GHz फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डहरूको लागि 5G लिलामी पूरा गर्‍यो, र यसलाई 3.5G फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डमा व्यापारिकरण गरिएको छ।
दक्षिण कोरियाको विज्ञान र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले यसअघि सन् २०१६ सम्ममा ५जी नेटवर्कका लागि छुट्याइएको २६८० मेगाहर्ज स्पेक्ट्रममा २६४० मेगाहर्जको ब्यान्डविथ बढाउने आशा गरेको थियो।
परियोजनालाई 5G+ स्पेक्ट्रम योजना भनिन्छ र दक्षिण कोरियामा विश्वको सबैभन्दा फराकिलो 5G स्पेक्ट्रम उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ। यदि यो लक्ष्य हासिल भयो भने, 2026 सम्म दक्षिण कोरियामा 5,320MHz को 5G स्पेक्ट्रम उपलब्ध हुनेछ।